Nidaamka Lacag celinta & Soo Celinta - WoopShop ®
Soo Celinta iyo Siyaasadda Soo Celinta
Haddii aanad helin sheyga wakhtiga ballanqaadka (60 maalmaha aan ku jirin shaqo maalmeedka 2-5) waxaad codsan kartaa lacag celin ama dib u soo celin. Haddii aad heshay shey qaldan, waxaad codsan kartaa lacag celin ama dib u soo celin. Haddii aadan rabin badeecada aad heshay, waxaad codsan kartaa lacag celin, laakiin waa inaad ku soo celisaa shayada kharashkaaga, sheyga waa in aan la isticmaalin oo lambarka raadinta loo baahan yahay.
Waxaad ku soo gudbin kartaa codsiyada lacag celinta 15 maalmood kadib dhalmada. Waad sameyn kartaa adoo noo soo diraya emayl.
Haddii laguu ogolaado lacagta laguu soo celiyo, markaa dib ayaa laguu soo celin doonaa, waxaana si toos ah loo isticmaali doonaa habka asalka ah ee lacag bixinta, maalmaha 14. Badeecadaha ku jira iibka, qadarka ayaa loo xisaabin doonaa isticmaalaha boorsadiisa si loogu isticmaalo iibsiyada mustaqbalka.
Haddii sabab kasta ha noqotee aad jeclaan lahayd inaad ku beddesho badeecadaada, laga yaabee inaad ku kala beddesho dhar ka duwan kan dharka. Waa inaad marka hore nala soo xiriirtaa annagana waan kugu hagi doonnaa tillaabooyinka. ** Fadlan ha u dirin soo iibsigaaga dib noogu soo celinta mooyaane haddii aan adiga kuu oggolaanin mooyee.